Unenkinga nge-touch screen se-iPad mini? Sikunikeza izixazululo | Izindaba zamagajethi
UPablo Ortega | | Tablets, I-Telephony
Ukuvuselelwa kwesoftware kwakamuva kwe-Apple kudale izinkinga ngamanye amadivayisi enkampani futhi okunye kokukhulus ethintekile kube yi-iPad mini (ikakhulukazi imodeli yesizukulwane sokuqala). Asigcini ngokuthola izingqinamba zokuxhuma kule nguqulo yethebhulethi yakwa-Apple, kodwa kukhona nezinkinga ezinkulu ngesikrini sokuthinta sedivayisi. Lokhu kungadalwa yizinkinga zehadiwe, kepha kukhona neziphazamisi zesoftware ezihlobene nokuzwela kwesikrini sokuthinta.
Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uzama ukuzulazula kufayela lakho le- I-iPad nesikrini akusebenzi kahle. Lesi isinambuzane okulula ukusibona nge-FaceTime, isibonelo. Ukuze wenze lokhu, qala ikholi yevidiyo entsha bese uhlola ukuthi izinkinobho zokushintshela kwikhamera yangemuva noma ukuqeda umsebenzi wezingcingo. Uma zingaphenduli ekuthintweni komunwe wakho, kusho ukuthi isikrini sakho se-iPad sinenkinga. Zama izixazululo ezilandelayo:
1 1. Ukuhlanza iScreen
2 2. Vuselela iSoftware
3 3. Phoqa ukusetha kabusha i-iPad
4 4. Setha kabusha izilungiselelo
5 Ngabe awusebenzi esikrinini sakho sokuthinta i-iPad mini?
1. Ukuhlanza iScreen
Isikrini sakho singangcola ngakho-ke kunzima kuye ukuthi aphendule ukuthinta kwakho noma angakuboni ngqo. Le yinkinga efana naleyo esiyiqoqile nesikrini se- I-Motorola Moto X isizukulwane sokuqala. Ngoba isihenqo se-iPad esihlanzekile Sincoma ngokufanele ukusebenzisa umkhiqizo omuhle okhethekile wokuhlanza izikrini zokuthinta noma ukumane usebenzise noma iyiphi indwangu onayo ukuhlanza izibuko. Uma ubeke ishidi lokuvikela esikrinini, lisuse ngoba lokhu kungaba imbangela yenkinga.
2. Vuselela iSoftware
Bheka ukuthi wena uhlelo lokusebenza lubuyekezwa enguqulweni yakamuva ekhishwe yi-Apple. Iya kuzilungiselelo- Okujwayelekile- Ukuvuselelwa kweSoftware. Landa inguqulo yakamuva. Uma usuvele ubuyekezele kwinguqulo yakamuva, qhubeka ngesinyathelo esilandelayo.
3. Phoqa ukusetha kabusha i-iPad
Uma inkinga iyi-software, ingahle ixazululwe nge- ngenkani ukuqala kabusha. Sikwazile ukuxazulula izinkinga zesikrini se-iPad mini yesizukulwane sokuqala ngalesi sinyathelo. Sincoma ukuthi uqale uvale zonke izinhlelo ozivule bese ucindezela inkinobho yokuvala nenkinobho yasekhaya ngasikhathi sinye imizuzwana eyishumi. Lapho uphawu lwe-apula luvela ungazidedela izinkinobho. Bheka ukuthi konke kusebenza kahle manje.
4. Setha kabusha izilungiselelo
Uma kungekho kulezi zinyathelo okusebenzele kuze kube manje, kungcono ukukwenza setha kabusha zonke izilungiselelo ze-iPad. Iya kuzilungiselelo- Okujwayelekile- Setha kabusha bese uqhafaza kunketho yokuqala: «Setha kabusha izilungiselelo». Imininingwane nokuqukethwe kwe-iPad yakho ngeke kususwe.
Ngabe awusebenzi esikrinini sakho sokuthinta i-iPad mini?
Ngemuva kwalokho kungenzeka ukuthi i- inkinga i-hardware. Okuwukuphela kwesixazululo esisele kuzoba ukuyisa esitolo sakho se-Apple esiseduzane noma uxhumane nabosekelo lobuchwepheshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Unenkinga nge-touch screen se-iPad mini? Sikunikeza izixazululo
UPablo Rangel kusho
ukuthinta kwe-Ipad yami akusebenzi, uma ngikwazi ukukuvula kepha uma ngishelela ukuze ngivule, idivayisi ayikuvumeli, sengivele ngenze zonke izinyathelo ezinconyiwe kepha angikwazi…. Engikwenzayo?? Mayelana
Phendula uPablo Rangel
Kwenzeka into efanayo kimi, ngiyakwazi ukukhuluma noSiri futhi ngigudle ingxoxo, kepha uma kukhulunywa ngokuslayida ukuvula lapho ngihlala. Futhi, ngine-Smart Case okuthi uma ngiyivula, kufanele ingithumele ukufaka iphini ngqo, kepha manje uma ngiyivula ithumela kimi ukuyishelelezisa. Ngikholwa ukuthi yisiphazamisi sesoftware esihlobene nokukhiya isikrini.
Ngesixazululo 3 kubuyiselwa (kuqala kusuka ku-zero)?
Ngishintshe isikrini ngoba, siphukile manje asisheleli, sivuleka kuphela
Kwenzeka okufanayo kimi, ngakushintsha futhi akusebenzi ...
Sawubona lapho..! wenzeni ngokuthinta? Nami ngiyishintshile ngoba enye iphukile kodwa lena ayisebenzi.
Ngesixazululo ezintathu kwaxazululwa inkinga yethebhulethi, ngesikrini esihlanyayo
Ubhale yedwa usephambene futhi
Edith galvan kusho
Uma ngivula i-iPad, bese ngiqala noma yiliphi ikhasi, ngemuva cishe kwemizuzu emihlanu liqala ukuhlinzeka njalo ngesikrini, amakhasi engingabuzi ukuthi ayavulwa, amakhasi afakwa kuGoogle, imidlalo iyavulwa, futhi ayikuvumeli uqale kabusha it.
Phendula u-Edith Galvan
Kwenzeka into efanayo kimi futhi ngemuva kokwenza izinketho eziningi abaziphakamisayo, kuyaqhubeka kanjena! Isixazululo iya ku-Apple naku-checkout nokuthi ungayiguqula kanjani. Akulungile ukuthi kukhona okungahambi kahle ngesikhathi esifushane kangaka!
Uma ngivula i-iPad, bese ngiqala noma yiliphi ikhasi, ngemuva cishe kwemizuzu emihlanu liqala ukuhlinzeka njalo ngesikrini, amakhasi engingabuzi ukuthi ayavulwa, amakhasi afakwa kuGoogle, imidlalo iyavulwa, futhi ayikuvumeli uqale kabusha it. Ngingakuxazulula kanjani lokho? Kungenzeka yini ukuthi imbangela wayeyishiya elangeni engahlosile ??? Ngiyabonga
OLG GUTIERREZ kusho
I-ipad yami iyi-mini 4 futhi isikrini sihlanya ukuthi kufanele ngishintshe yonke i-digitizer noma phezulu nje.
Phendula u-OLG GUTIERREZ
yebo lopez kusho
Ukubingelela, i-iPad yami Hhayi muva nje, ungasebenzisa ikhibhodi, kubonakala sengathi ingxenye engezansi ayiphenduli (isikhala, izinombolo, njll.) Ukuze isebenze kufanele ujike. Futhi-ke kuyasebenza kepha okwesikhashana futhi kuhlala kunjalo. Ngicela uphakamise ukuthi ngenze ukuze ngikuxazulule, ngiyabonga imeyili dopyen@hotmail.com
Phendula u-Yenz lopez
Ahhh ngikhohliwe. Kubuye kuthathe isikhathi eside ukushaja ibhethri futhi kugqoke ngokushesha okukhulu, ngiyabonga
UFRANCISCO KUQINISEKILE kusho
Ezinsukwini ezimbili ezedlule ngivuselele i-ipad yami encane futhi kusukela izolo izikhathi ziba zinhle bese isikrini siyancipha, kungaba yini ???
Phendula ku-FRANCISCO RECALDE